CBD Maqaarka| Dragons Head Shop
Bogga ugu weyn → Daryeelka maqaarka ee CBD
Daraasaduhu waxay soo jeediyeen in alaabada daryeelka maqaarka ee CBD ay leeyihiin astaamo ay ka mid yihiin:
Natiijooyinka ka-hortagga bararka ayaa dhici kara marka la mariyo maqaarka, taas oo gacan ka geysan karta dejinta xaaladaha maqaarka sida cambaarta, cudurka psoriasis ama finanka.
Codsiga maadada ah ayaa kaa caawin kara yaraynta xanuunka muruqa.
Sii gargaar ka yimaada gubidda qorraxda iyo qaniinyada cayayaanka.
Waxaa suurtogal ah inay hoos u dhigto soosaarka saliidda xad -dhaafka ah (saliidda), taasoo laga yaabo inay ka caawiso yareynta dhibcaha.
Guryaha antioxidant -ka ee la soo jeediyay ayaa kaa caawin kara khadadka wanaagsan iyo gabowga.
Ujeeddada loogu talagalay CBD waa in loo isticmaalo sidii kaabe dabiici ah. CBD waa inaysan ku beddelin daawo rasmi ahaan loogu qoray xirfadle caafimaad. Badeecadaha CBD ee lagu iibiyo mareegahayaga looma jeedin ogaanshaha, daaweynta, daaweynta ama ka -hortagga cudur kasta. Had iyo jeer la tasho xirfadlahaaga daryeelka caafimaadka ka hor intaadan qaadin wax alaab CBD ah haddii ay dhacdo waxyeellooyin ama dhibaatooyin iman kara, ka hor intaadan isticmaalin badeecad kasta ama aadan u diyaarin qorshe daaweyn cudur kasta ama xaalad kasta.
Fiiri dhammaan Ambience CBD Canabidol Magangalyada CBD Khadka CBD Daryeelka maqaarka ee CBD Elixinol Apron Cagaaran Dhir Infusions JCS Marwada Cagaaran LVWell CBD Marley Imaatinka cusub Geedka Nolosha daahir PuroCuro
Endoca 500mg CBD Suppositories - 10 Tirin
NKD 250mg CBD-ku-jirta HALEN MôN Badda Cusbada Timaha Tonic - 175ml
Magangalyada CBD 500mg CBD Pro Balm
Endoca 20mg CBD Lips + Moisturizer Maqaarka - 4.25g
Green Apron 300mg CBD Murqaha Balm
Green Apron 100mg CBD Math Math Bath Salts 500g
Green Apron 100mg Saabuun CBD - Shaambo Set 100g
Apron Cagaaran 500mg Saliida Duugista Murqaha 250ml